Milan waxay tebeysaa dhirbaaxadaydii: ”Ma jecleeyn qaab-jarriinka tinta El Shaarawy iyo xitaa sunniyihiisa” – Gattuso | Gool FM	Wednesday, February 10th, 2016	Home
Milan waxay tebeysaa dhirbaaxadaydii: ”Ma jecleeyn qaab-jarriinka tinta El Shaarawy iyo xitaa sunniyihiisa” – Gattuso
(Sion) 11 Dis 2012 Raacaha kulul ee khadka dhexe Gennaro Ivan Gattuso ayaa dib u jalleecay kooxda AC Milan oo uu xagaagii ka tegey isagoo raalli gelin ka bixiyay hadal uu ayaan hore sheegay oo ahaa inuu isbedelay qolka lebiska Milan oo uu ku tilmaamay mid foowdo noqday.
“Waan jeclahay Milan. Waxay ahayd riyo dhamaatay kadib 13 sanadood. Waxaana isu arkaa taageere xagjir ah oo ku guulaystay koobka horyaallada Yurub iyo laacibka 6-aad ee ugu safashada badan naadiga Milan taariikhdeeda oo dhan.” ayuu isku qanciyay Gattuso
“Hadda waxaan fahmi karaa inay khalad tahay in jiilka kugu xiga aad ka rajeeyso inay sidaada oo kale u dhaqmaan. Ma jecleeyn qaab-jarriinka tinta El Shaarawy, iyo xitaa sunniyihiisa.” ayuu ku kaftamay
“Laga yaabee inay tebayaaan dhirbaaxadaydii, lkn waan ku celinayaaye waan khaldanaa haatan Al Shacraawi wuxuu muujinayaa inuu yahay xidig soo baxay.” ayuu qiray Gattuso.
Wararka	NINKII ay difooseyaasha Chelsea cunsuriyadeeyeen oo sanad kaddib meeshii lagu tagooray yimi, PSG oo ku guuleystay talaabo ay Chelsea ku fashilantay bilowgii dhacdada iyo wax walba oo ku saabsan wararka soo kordhay….
(London) 10 Feb 2016. NINKII ay taageereyaasha ku ...	“Guushii aan ka gaarnay Liverpool waa mid taariikhdu ay xusi doonto” – Slaven Bilic
(London) 10 Feb 2016 Tababaraha kooxda West Ham United Slaven ...	Heshiiskii Jackson Martinez uu ugu biiray Atletico Madrid oo la shaaciyay!
(Madrid) 10 Feb 2016 Maalmahaan waxaa socday in la ...	Klopp oo difaacay Benteke: xaaladaan oo kale way soo martaa weerar yahanada oo dhan”!
(Liverpool) 10 Feb 2016 Tababaraa kooxda Liverpool Jurgen Klopp ...	MAXA PIQUE UGA LUMAY MADRID!? Mar kale ayuu weerar afka ah ku qaaday…..Ogow waxa uu yiri.
(Madrid) 10 Feb 2016. Gerard Pique waxa uu ...	SIR CULUS: Perez oo isku dayay inuu Real Madrid ka cayriyo Zidane (Aqri sheekada)!
(Madrid) 10 Feb 2016 Madaxwaynaha kooxda Real Madrid Florentino ...	Barcelona oo diyaar u ah in Sergio Busquets ay ka dhigto laacibka 3-aad ee ugu mushaarka badan kooxda (Laakiin waa goorma?)
(Barcelona) 10 Feb 2016 Kooxda Barcelona ayaa durbadiiba dareentay ...	DAAWO: Fursadihii cajiibka ahaa ee xalay uu khasaariyay Christian Benteke!
(Liverpool) 10 Feb 2016 Weerar yahanka reer Belgium ayaa ...	Jose Mourinho oo saaxiibadiis u sheegay inuu noqon doono macallinka cusub ee Man United xilli ciyaareedka dambe
(Manchester) 10 Feb 2016 – Sida wararku ay sheegayaan ...	Tababare Jurgen Klopp oo ka hadlay ka haritaankii kooxdiisa Liverpool ee FA Cup
(Liverpool) 10 Feb 2016 – Tababaraha kooxda kubadda cagta ...	GoolFM Mobile (USA)	About usContactsWaxaan NahayNagala Soo Xiriir	Copyright © Gool FM 2016. All Rights Reserved. Hosted By Afro